Posted by တန်ခူး at 11:36 PM
ရိုးသားခြင်းနဲ့ မဖွဲ့နွဲ့တဲ့သစ္စာတရားဆိုတာ ပေးဖူးတဲ့ပန်းတပွင့်ထက် ပိုလှတယ်။ ဖတ်ဖူးတဲ့ကဗျာတပုဒ်ထက် ပိုရသမြောက်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် မောင် ဟာ မြတ်နိုးစရာ။
ရိုးရိုးလေးနဲ့ စာကိုလှအောင်ရေးတတ်သူမို့ ၂၀၀၈ မှာ တန်ခူးဆိုတဲ့ စာပေသူငယ်ချင်းတယောက် တိုးရပြန်ပြီ။
အရမ်းကိုကောင်းတဲ့ကဗျာလေး.....မြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့မောင်, စေတနာရင်မှာအပြည့်နဲ့မောင်,အနွံတာခံနားလည်ပေးတတ်မောင့်ကို အချစ်တွေတိုး တန်ဖိုးထား အမြဲနားလည်နော် တန်ခူး.....
အရမ်းလှတဲ့ ကဗျာလေးပါလားကွဲ့။ သူနဲ့လည်း အင်မတန် ထိုက်တန်တဲ့ ကဗျာပါ။
(အဲဒီ တန်ခူးရဲ့ မောင် က ကျောင်းပွဲတွေမှာ အသဲခိုက်အောင်အေးတဲ့ ရေခဲရေထဲ စိမ်ထားတဲ့ အအေးပုလင်းတွေ သူတယောက်တည်း ဒိုင်ခံနှိုက်ပေးနေကတည်းက၊ နားမလည်တဲ့ စာတွေ ရှင်းပြဖော်ရကတည်းက “သူများ” ရင်ထဲခိုက်နေတာ။….“သူများ” က မိန်းကလေးမဟုတ်တာ တန်ခူး ကံကောင်းတယ်မှတ်ပါ။ ဟိဟိ။)
တန်ခူးရေ.."ရွက်ခြောက်လေးတွေကိုဘဲ တယုတရ လိုက်ကောက်နေရတာဟာလဲ..တကယ်တော့ချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားတွေအတွက် သံစဉ်မလိုတဲ့တေးတပုဒ်ပါဘဲလေ..။
(မတောက်တခေါက်နဲ့စပ်ထားတဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ် တန်ခူး နဲ့ တန်ခူးရဲ့ 'မောင်'အတွက်လက်ဆောင်ပေးပါရစေ.)
ငြိမ်းချမ်းခြင်းတို့ ရာသက်တိုင်စေ...။ ။
မရဲ့ မောင်ကော ကြိုက်လား မသိဘူး.. ပြသေးလား
commentလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဝေလင်း။ ကိုဝေလင်းရဲ့ စာပေသူငယ်ချင်း ဖြစ်ခွင့်ရတာ အရမ်းဝမ်းသာမိပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုဝေလင်းက ကျွန်မလေးစားရတဲ့ စာပေဆရာ၊စာပေအကို ပါ။ လိုတာရှိရင် ပြုပြင်ပေးပါဦးနော်။
နှင်းပန်းရေ...နှစ်ကိုယ်တူဘဝတွေမှာ နားလည်မှူက အသက်မို့ အမြဲ နားလည်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။(တခါတခါတော့ စိတ်ကောက်တာပေါ့နော် 8-))
ကိုပေါရေ...ပျော်စရာcommentလေးအတွက် ကျေးဇူးနော်။ ကိုပေါခိုက်တဲ့ 'သူ့' ကိုပေးဖတ်လိုက်တယ်။
ထနောင်းရေ...ထနောင်းရဲ့ လက်ရာမြောက်တဲ့ ကဗျာလက်ဆောင်လေးကို ရင်မှာ အမြတ်တနိုး သိမ်းထားလိုက်ပြီ။
အိမ့်ရေ...နေမကောင်းတဲ့ကြားက လာလည်တာ ကျေးဇူးနော်။ မောင့်ကို ပြဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာဆုံးတော့ ပြုံးနေတယ်။ ကဗျာကို ကြိုက်လို့ ပြုံးတာလား ကိုပေါcommentကြောင့်လားတော့ မသိဘူး။
အတူတူပဲ အတူတူပဲ အဟဲဟဲ
မတန်ခူးရဲ့ ကဗျာလေးကိုပဲ ပြလိုက်မှ ထင်တယ်။
မနေ့ညက ဘလော့ဂ်တွေ သိပ်မလည်ဖြစ်လိုက်။
ပန်ရေ...အတူတူပဲလား? ဒါဆို ကဗျာရေးတော်တဲ့ ပန့်ရဲ့သူ့ အကြောင်း ကဗျာလေးတပုဒ် လောက်ဖတ်ချင်တယ်။ မွေးနေ့တုန်းက ကဗျာလေးတပုဒ်ပဲ ဖတ်ဘူးသေးတယ်။ တို့ကဗျာထက် ပန်ကိုယ်တိုင်စပ်တဲ့ ကဗျာလေးကို သူက ပိုမြတ်နိုး မှာပေါ့။